၂၀၁၉ မှာ ကံအကောင်းဆုံး စနေ သားသမီးတွေပါ
August 1, 2019 Thuta Star 0
ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၁–ခုနှစ်၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (၁၃)ရက် (၁၇–၄–၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။ စနေသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁–ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း ဘုန်းတန်ခိုးကြီးခြင်း၊သြဇာအာဏာထက်မြက်ခြင်း၊ အကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ခြင်း ၊ မင်းစိုးရာဇာကူညီမစခြင်း၊ပက်သက်ရခြင်း ၊ အလုပ်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာ ရန်အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင်များပေါများပြီး ၄င်းတို့အပေါ် ကံအသာစီး အနိုင်ရရှိခြင်း၊ […]
ခင်ပွန်းသည် ရုပ်ဆိုးလို့ အများက ဝေဖန်အပြစ်တင်ကျပေမဲ့ မေတ္တာမပျက် ဆက်ချစ်နေတဲ့ ကောင်မလေး
ခင်ပွန်းသည် ရုပ်ဆိုးလို့ အများက ဝေဖန်အပြစ်တင်ကျပေမဲ့ မေတ္တာမပျက် ဆက်ချစ်နေတဲ့ ကောင်မလေး ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ဆန်းကျယ် သလောက် နက်ရှိုင်းမှု ရှိပါတယ်။ အပေါ်ယံ ပကာသနတွေ အပေါ် စွဲလမ်းပြီး ချစ်တာတွေ၊ ရုပ်ရည်ရူပကာကို ကြည့်ပြီး ချစ်တာတွေ စတဲ့ အပေါ်ယံကိုကြည့်ပြီး ချစ်ကြိုက်သူတွေ များစွာရှိတဲ့ အထဲမှာ […]
လေယာဉ်ပေါ်က ခုန်ချ အဆုံးစီရင်သွားတဲ့ ၁၉ နှစ် အရွယ် ကျောင်းသူလေး
မိဘများနဲ့ စကားများပြီး လေယာဉ်ပေါ်က ခုန်ချ အဆုံးစီရင်သွားတဲ့ ၁၉ နှစ် အရွယ် ကျောင်းသူလေး ကမ်းဘရစ်ခ်ျ တက္ကသိုလ်မှ အသက် ၁၉ နှစ် အရွယ် ဇီဝဗေဒသိပ္ပံ အထူးပြု ကျောင်းသူ တစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ သုတေသနခရီး ကနေ လေယာဉ်စီးကာ အိမ်ကိုပြန်နေစဉ် ရုတ်တရက် […]
သေဆုံးသူတွေ့ရဲ့ သမီးလေးက မိဘနှစ်ပါးလုံးကို သတ်ခဲ့တဲ့ တရာခံ ထောင်ကျခါနီးမှာ လာတွေ့ပုံ
ဘီယာခြောက်လုံးအတွက် ဒေါ်လာ တစ်သန်းခြောက်သိန်း ပေးဆပ် ခဲ့ရသည့် ထိုင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ယခုဖေါ်ပြထားတဲ့ ပုံဟာ မိဘနှစ်ပါးကို သတ်ခဲ့တဲ့ တရားခံကို တရားရုံးက အမျိန့် ချတဲ့နေ့ မှာ တရားခံကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့သမီးဖြစ်သူက တရားခံကို ဖခင်အရင်းတယောက်လို တရားရုံးရှေ […]
မြန်မာပြည် ယိုယွင်းနေတဲ့ ကျန်းမာရေးစနစ်ရဲ့ နောက်ထပ် မြေစာပင်လေး တပင်အကြောင်း
ယိုယွင်းနေတဲ့ မြန်မာပြည်ကျန်းမာရေးစနစ်ရဲ့ နောက်ထပ် မြေစာပင်လေး တပင်အကြောင်း ရင်နာတယ် အဖေ့သားလေးရေ၊ ငါ့သားလေး မသွားချင်ပါဘူးလို့ ခဏခဏပြောနေတဲ့ကြားက အဖေတို့ခေါ်သွားမိခဲ့ တာလေ ဒီလိုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကို အဖေသားလေး ကြိုများသိနေသလား သားလေးရယ်၊ သားရယ် အဖေတို့က ကောင်းစေချင်တဲ့ မေတ္တာနဲ့ ဒီနေရာကိုခေါ်လာခဲ့မိတာပါ ငါ့သားရယ်၊ ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ပဲ မမျှော်လင့် […]
သူငယ်ချင်းကို ကျောက်ကပ်လှူပေးခဲ့ပေမယ့်လည်း မခေါ်မပြောတာကို ခံနေရတဲ့ မိန်းကလေး ရဲ့အဖြစ်
၂၀၁၇ နွေရာသီတုန်းက ဆလီနာရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရေဆာက ဆလီနာကို ကျောက်ကပ်လှူပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမှုက အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ ဆလီနာကဟာ ရေဆာကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါတယ်။ “သူမဟာ ကျွန်မကို အစားထိုးလို့မရတဲ့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ ကျောက်ကပ်တစ်ခုကို ကျွန်မအတွက် စတေးခဲ့တာပါ။ သူမသာ မကယ်ရင် ကျွန်မသေနေလောက်ပြီ။ […]
လင်မယားတို့ အိပ်ရာထက်မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြစ်ဖို့ ….
အိမ်ထောင်သည်တိုင်းအတွက် အိပ်ယာထက်မှာ ရှိတဲ့ အချိန်ခဏလေးအတွင်းဟာ တကယ့်ကို အဖိုးတန်တဲ့ အချိန်ပါ။ လင်မယားတိုင်းအတွက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆက်ဆံကြတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးကလည်း ပျော်ရွှင်နေပြီး ဆက်ဆံချင်စိတ် ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး သာယာဖို့ ဒါကလည်း လိုအပ်တယ်မလား။ တချို့ကတော့ အိမ်ထောင်သက်ကြာတဲ့အခါမှာ ဆက်ဆံချင်စိတ် မဖြစ်တော့တာ၊ တာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့ […]
မုဒိန်းမှုဆို ဘယ်​သူ့လက်​မှမအပ်​ဘဲ လူများများနှင့် လက်သည်မေ​ပ်ါအောင် သတ်​ရ​တော့မယ်ကိန်းလို့ ပိုးဖြူ ပွဲကြမ်း…
ဒီ​နေ့ ရုံးတင်​စစ်​​ဆေးတဲ့ သမီး​လေးဗစ်​တိုးရီယား​လေးရဲ့အမှု တတိယ​အကြိမ်​ရုံးချိန်းမှာ သမီး​လေး​မေ​မေက ဆရာမ မနှင်းနုကို ​နောက်​တိုးတရားခံအဖြစ်​ ဖမ်းဆီးစစ်​​ဆေးဖို့ဆိုတဲ့ ​လျှောက်​ထားချက်​ကို တရားရုံးကပယ်​ချလိုက်​တယ်​လို့ သိရပြီး မနှင်းနုရဲ့သက်​​သေထိန်​ချန်​မှုကို အ​ကြောင်းက​တော့ ပုဒ်​မ ၃၇၆ မုဒိန်းမှုနဲ့ စွဲချက်​တင်​တဲ့ အမှုအခင်း​တွေမှာ ဒီလို​နောက်​တိုးတရားခံ ဖမ်းဆီး စစ်​​ဆေးရမယ်​လို ပြဌာန်းထားတာ မရှိတဲ့အတွက်​လို့ ဆိုပါတယ်​။ […]
မိန်းကလေးတွေဓမ္မတာလာချိန် ကိုယ့်ချစ်သူအမျိုးသားဆီကအ မျှော်လင့်ဆုံးအရာ…
မိန်းကလေးတွေဓမ္မတာလာချိန် သူတို့အမျိုးသား တွေဆီက ဘယ်အရာကို အလိုချင်ဆုံးလဲဆိုတာ သိကြလား..မိန်းက လေးတွေက ဒီလိုအချိန်ဆို ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးစိတ်ခံစားမှု အတွက်တာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအသိပါပဲ။ သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေက ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ထိလွယ်ရှ လွယ်တဲ့ချိန်မှာ သူတို့ ရဲ့ ချစ်သူ ၊ သူတို့ အမျိုး သားတွေကို ပိုပြီးလိုအပ်တတ်ကြပါတယ်။ […]
စိတ်​​ပျော်​ချင်​ရင်​ ..ယောကျာ်းယူပါ …
စိတ်​​ပျော်​ချင်​ရင်​ ..ယောကျာ်းယူပါ …!! အလုပ်မှာမကျေနပ်သမျှ သူ့ကိုမဲလို့ရပါတယ်… ပျော်ရွှင်လာတာရှိရင် သူ့အပေါ်အားရပါးရခုန်တက်လို့ရပါတယ် နေမကောင်းခဲ့ရင် အသားကုန်ချွဲ ရေသာခိုလို့ရပါတယ် ထမင်းစားပြီး ပန်းကန်ဆေးဖို့ပျင်းရင် ခြိမ်းခြောက်ခိုင်းလို့ရပါတယ် ဗိုက်ဆာတဲ့အခါ Mini mart မှာ တူတူအသင့်စားလို့ ရတာတွေ ထွက်ဝယ်လို့ရပါတယ် လကုန်လို့ကိုယ့်လခမလောက်ရင် သူ့လခကို ရုပ်တည်နဲ့ ကိုယ့်ဟာလုပ်ပစ်လို့ရပါတယ် ကိုရီးယားကားကြည့်ရင်း […]